မြန်မာဒီဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးဖိုရမ် ၂၀၂၀ တက်ရောက်ရန်ကိုယ်စားလှယ်များ ဖိတ်ကြားခြင်း Call for Delegates: Myanmar Digital Rights Forum 2020
၂၈ - ၂၉ ရက် ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၀။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာ နဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ မြန်ဆန်စွာ ပြောင်းလဲ ဖြစ်ထွန်းနေမှုတွေကို ကြုံတွေ့ရတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့ အညီ ဒီဂျစ်တယ် နည်းပညာတွေရဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေအပေါ် လက်ရှိ သက်ရောက်နေတာတွေ၊ သက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် နိုင်ငံမှာ မှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့ မူဝါဒတွေ နဲ့ ကျင့်သုံးမှုတွေ ထားရှိချမှတ် ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီဂျစ်တယ် အခွင့်အရေးဖိုရမ် က အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ စာနယ်ဇင်းနဲ့ သတင်းမီဒီယာသမားတွေ၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပက မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ပညာရှင်တွေ၊ နည်းပညာရှင်တွေနဲ့အတူ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနဲ့ အစိုးရကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ စတဲ့ ဒီဂျစ်တယ် အခွင့်အရေးတွေကို စိတ်ဝင်စားပြီး နားလည် တက်ကျွမ်းသူတွေကို စုစုပေါင်း ၁၅၀ ဦးလောက်ကို ဖိတ်ခေါပြီး ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာတွေရဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေအတွက် စုပေါင်း ဆွေးနွေး အဖြေရှာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်အနေနဲ့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရှိသင့်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေ ရရှိဖို့ ၊ အင်တာနက်ဆိုင်ရာ မူဝါဒတွေက လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ လိုလားသူဖြစ်ပါက မြန်မာဒီဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးဖိုရမ် ၂၀၂၀ ကို တက်ရောက် ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
(တက်ရောက်လိုပါက အောက်ပါ အချက်အလက်တွေကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ပို့ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုရမ်ကျင်းပတဲ့ နှစ်ရက်လုံးကိုလည်း တက်ရောက်နိုင်သူ ဖြစ်ရပါမယ်။ တက်ရောက်ခွင့် ပြု၊ မပြု အတည်ပြုစာကို အီးမေးလ် ပြန်ပို့ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။)
28th-29th February, 2020
As Myanmar continues to experienceadigital leapfrog and connectivity revolution, the country needs right policies and practices to address potential and actual impacts of digital technologies on human rights and society.
Myanmar Digital Rights Forum will bring together 150 representatives from across the world with an interest or expertise in digital rights issues and internet policies to seek collective answers to impacts of technologies on society and human rights.
Are you someone who wants to have the right policies and practices been put in place to protect people’s rights on the internet?
Join the discussion at the 2020 Myanmar Digital Rights Forum - beaDelegate!
(You will need to submit this form by 10th February, 2020, and you will need to attend the two days of Myanmar Digital Rights Forum and we will send you the confirmation email)
အမည် | Name *
အဖွဲ့အစည်း | Organization *
ရာထူး | Position *
ဖုန်းနံပါတ် | Phone Number *
အီးမေးလ် | Email *
ဘယ်မြို့ကနေ တက်ရောက်မှာလဲ။ (ဥပမာ - ကလော ၊ ရှမ်းပြည်နယ်) Which city are you from? (eg: Kalaw, Shan State) *
နှစ်ရက်လုံးတက်ရောက်နိုင်ပါသလား။ Are you able to attend2days? *
အစားအသောက်ကန့်သတ်ချက်ရှိပါသလား။ Dietary restrictions *
မရှိပါ | None
သားသတ်လွတ် | Vegetarian
ဟာလာအစားအစာ | Halal
အခြားလိုအပ်သည်များရှိပါသလား။ Do you have any special access requirements? *
ဟုတ် - သွားလာရေးအခက်အခဲရှိပါတယ်။ Yes - mobility requirements
ဟုတ် - အကြား/အမြင် ဆိုင်ရာအကူအညီလိုပါတယ်။ Yes - visibility or audio requirements
မြန်မာစကားမပြောတတ်ပါ။ Yes - I do not speak Myanmar
အင်္ဂလိပ်လိုမပြောတက်ပါ ။ Yes - I do not speak English
မရှိ ။ No
တက်ရောက်ရန် အထောက်အပံ့လိုအပ်ပါသလား။ Do you require support to attend? *
ဟုတ် - ရန်ကုန်သို့လာရန် ခရီးစရိတ်။ Yes - for travel to Yangon
ဟုတ် - ခရီးစရိတ်နှင့် တည်းခိုရန် ။ Yes - for travel and accommodation in Yangon
မည်သည့် ကိစ္စရပ်တွေကို လုပ်ဆောင်နေသလဲ။ What is your professional background? *
Journalist / media worker
အောက်ပါတို့အနက် မည်သည့်အချက်များကို သင်လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်နေပါသလဲ။ Have you worked on any of these issues? *
ပြည်သူပါဝင်ပူးပေါင်းမှု | Civic Participation
အင်တာနက်ရယူအသုံးပြုပိုင်ခွင့် | Access to the internet
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု | Transparency
ငြိမ်းချမ်းရေး & ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေး | Peace & Conflict Resolution
ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေး | Digital rights
ကျား-မဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး | Gender rights
လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်/သတင်းအချက်အလက်/ မီဒီယာအခွင့်အရေး | Free expression / information / media rights/
LGBT အခွင့်အရေး | LGBT rights
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ လုံခြုံမှုအခွင့်အရေး | Privacy rights
မည်သည့် ကိစ္စကို ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလိုပါသလဲ။ What issues would you be interested to participate? (Please choose all that apply) *
လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုရေးသားခွင့် / Freedom of Expression
အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မူ / Internet Shutdown
ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းပြဌာန်းခြင်း - ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှဖယ်ရှားခြင်း၊ ဖျက်ခြင်းနှင့်ပိတ်ပင်ခြင်း / Self-regulation: Facebook removals, deletions, and bans
ဒီဂျစ်တယ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်း ၊ အွန်လိုင်းဆန္ဒပြခြင်း၊ အွန်လိုင်း စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်း ၊ လူမှုရေး (သို့) နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်အတွက် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များကို ခွင့်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်သည့် လှုပ်ရှားမှု/ Digital advocacy / online protest / campaigns / hacktivism
အင်တာနက်နှင့် မိုလ်ဘိုင်းဖုန်း ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သနည်း / How the internet and mobile works
ဒစ်ဂျစ်တယ် ပစ္စည်းများ၏လုံခြုံမှု / Device Safety
ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာလုံခြုံမှု / Communication Safety
ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် လုံခြုံမှု / E-Government/Privacy and E-government
စောင့်ကြည့်ခြင်း / Surveillance
ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနှင့်ဆိုက်ဘာရာဇဝတ်မှု / Cyber security and cyber crime
မသန်စွမ်းသူများ နှင့် အထောက်အကူပြုနည်းပညာများ / Disability/assistive technologies
ဒစ်ဂျစ်တယ်စာတတ်မြောက်ရေး / Digital Literacy
ကျန်ုပ်တို့တွင် open sessions များရှိပါသည်။ သင့်အနေနှင့် မည်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးချင်ပါသနည်း။ session ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘာဖြစ်ပါသလဲ။ ဒီအစည်းအဝေးမှာဘယ်သူက ဦး ဆောင်ဆွေးနွေးမည်နည်း။ အသေးစိတ်ရေးသားဖော်ပြပေးပါ။ We will have open sessions. Would you like to propose and runasession? What would the session’s title be? What format would it be? Who else would lead or discuss in the session? Please be specific.
- ဆွေးနွေးပွဲပြီးသွားသည့်အခါ အချက်အလက်များထဲမှာ နာမည်နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာမှ လွဲ၍ ကျန်သည့်အချက်အလက်များအားလုံးကို ဖျက်သိမ်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ နာမည်နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာကို သိမ်းရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ ၂၀၂၁ ဆွေးနွေးပွဲအတွက် ဖိတ်ကြားရန်သာ ဖြစ်ပါသည်။
- Only the organizing team will have access to these days.We will not share with any other person or third party.
- All data will be deleted at the end of the Forum with the exception of names and email addresses which will be stored safely with the intention ofa2021 Forum.
- Also note we use Google products such as Gmail and Google Drive to facilitate the organization of the forum. You can access Google's privacy policies here. https://policies.google.com/